आज सुनको मूल्य १ हजार ५ सयले घट्यो | Kendrabindu Nepal Online News
आज सुनको मूल्य १ हजार ५ सयले घट्यो
६ चैत्र २०७६, बिहीबार १०:५७
नेपाली बजारमा सुनको मूल्य आज प्रतितोला १ हजार ५ सयले घटेको छ । यस हप्ता सुनको मूल्य घटबढ हुने क्रम निरन्तर रहेको छ । आइतबार १५ सयले घटेर प्रतितोला ७७ हजारमा कारोबार भएको सुन सोमबार ५ सय रुपैयाँले बढेको थियो ।
मंगलबार सुन ७५ हजार ५ सयमा कारोबार भएको थियो । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार बुधबार सुन एक हजारले बढ्दै ७६ हजार ५ सयमा कारोबार भइरहेको मा विहिबार भने १५ सयले घट्दै ७५ हजारमा कारोबार भइरहेको छ । चाँदीको मूल्य पनि आज ३० रुपैयाँले घट्दै प्रतितोला ६८० रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ ।
गत हप्ताको मंगलबार छापावाल सुन प्रतितोला ८२ हजार ७ सय रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो । कोरोना भाइरसको प्रभावका कारण सुनको मूल्य घटबढ भएको महासंघका पूर्वअध्यक्ष तेजरत्न शाक्य बताउँछन् ।
१ हजार ५ सय, घट्यो, सुनको मूल्य
Prevआज सर्वोच्चसहित सबै जिल्ला अदालतहरु बन्द
एसइई प्रश्नपत्र सुरक्षित गर्न बोर्डको आग्रहNext
सुनको मूल्य एकै दिन ६ सयले बढ्यो
ह्वात्तै बढ्यो सुनको मूल्य, कति पुग्यो आज ?
सुनको मूल्य आज पनि बढ्यो, प्रतितोला कति ?
सुनको मूल्यमा आज नयाँ रेकर्ड : एक वर्षमै २७ हजार ३०० रुपैंयाँले बढ्यो, कति पुग्यो आज ?
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सुनको मूल्य हालसम्मकै उच्च, नेपालमा के पर्छ असर ?